Gudoomiyaha Gobolka Mudug oo kormeeray xarunta maxkamadda gobolka ee Galkacyo. – Radio Daljir
Janaayo 26, 2016 2:40 b 0
Galkacyo, 26, Jan, 2016-Gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif ayaa maanta kormeeray xabsiga gobolka Mudug ee magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Gudoomiyaha racfaanka gobolka Mudug mudane Siciid Maxamed Maxamuud oo gudoomiyaha gobolka Mudug warbixin siiyey ayaa tilmaamay in maxkamaddu ay ka gooban tahay Saddex xafiis labo heer gobol iyo mid heer degmo ah, wuxuuna codsaday in lasiiyo dhul waasac ah oo garsoorka gobolku ku shaqeeyo.
Xeer ilaaliyaha gobolka Mudug Muxuyadiin Cabdulqaadir, ayaa balanqaaday inay lashaqayn doonaan maamulka gobolka Mudug, wuxuuse codsaday in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen deegaan wanaagsan oo ay ku shaqeeyaan.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Mudane Xasan Maxamed Khaliif, ayaa sheegay in ka maamul ahaan wixii awoodooda ah ay ka qaban doonaan baahiyaha ay usoo gudbiyeen mas’uuliyiinta maxkamadda iyo xeer ilaalinta guud ee gobolk
(DHAGEYSO)-Barnaamijkii Ciyaaraha ee Sports News iyo Weriye Sucdi Cawiif.